အွန်လိုင်းစတိုး သို့မဟုတ် အီးကောမားစ်စတိုး သို့မဟုတ် ဒီဂျစ်တယ်စီးပွါးရေးလုပ်ငန်း တွေဟာ တနေ့တခြား ပေါက်ကွဲလုမတတ် တိုးပွါးလာနေကြတယ်။ အင်တာနက်မဟုတ်တဲ့ အပြင်စျေးဆိုင်တွေမှာ ဖွင့်ထားကြတဲ့ တချို့သောဆိုင်တွေဟာ ရောင်းအားကျလို့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိတ်နေကြရတယ်။ ဘယ်သောအခါမှ ပြန်ဖွင့်ဖြစ်ကြတော့မည် မဟုတ်ပေ။
အရင်တချိန်က အွန်လိုင်းရှော်ပင် Online Shopping ဟာ လူနည်းစုတချို့အတွက် လွယ်ကူမှုတစ်ရပ်မျှသာ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ယခုတော့ နိစ္စဓူဝ အရေးပါတဲ့ လိုအပ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်လာနေတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဒီဂျစ်တယ်စီးပွါးရေး ကို လူတွေ စိတ်ဝင်စားလာကြပုံဟာ အရင် ဘယ်တုန်းကနဲ့မှ မတူတော့ဘူး။
ဒါပေမဲ့လည်း အောင်မြင်တဲ့ အွန်လိုင်းလုပ်ငန်း တစ်ခုကို ဘယ်က ဘယ်လို စတင်ရမလဲဆိုတာကတော့ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများအတွက် ပုစ္ဆာအသစ် တစ်ပုဒ်လို ဖြစ်နေတတ်တယ်။
အောင်မြင်တဲ့ အွန်လိုင်းစတိုး သို့မဟုတ် အီးကောမားစ်စတိုး သို့မဟုတ် ဒီဂျစ်တယ်စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များနဲ့ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်တယ်။
လက်ရှိ အွန်လိုင်းစျေးကွက်တွေမှာ ကျင့်သုံးနေကြတဲ့ အီးကောမားစ်စီးပွါးရေးမော်ဒယ် Ecommerce Business Models တွေကို လေ့လာမယ်
အွန်လိုင်းစျးကွက်တစ်ခုမှာ စားသုံးသူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်/လိုအပ်နိုင်ချေများ Niche ကို လေ့လာမယ်
ပစ်မှတ်ထားစျေးဝယ်သူများနဲ့ အရောင်းသွက်ကုန်ပစ္စည်းများကို လေ့လာမယ်
လုပ်ငန်းနာမည်ရွေးချယ်မယ် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ယူမယ်
ဒီဂျစ်တယ်စီးပွါးရေးအစီအမံ Business Plan တွေကို ရေးဆွဲမယ်
အွန်လိုင်းစတိုး Online Store ကို တည်ဆောက်မယ်
အွန်လိုင်း စျေးဝယ်သူ ကတ်စတမ်မာ တွေကို စွဲဆောင်မယ်
1. Ecommerce Business Models အီးကောမားစ်စီးပွါးရေးမော်ဒယ်များ ကို လေ့လာခြင်း
အွန်လိုင်းစတိုး တစ်ခုကို စတင်မဖွင့်လှစ်သေးခင်မှာ အွန်လိုင်းစျေးကွက် တွေမှာ လက်ရှိ အသုံးပြုနေကြတဲ့ ဒီဂျစ်တယ်စီးပွါးရေးမော်ဒယ် သို့မဟုတ် အီးကောမားစ်စီးပွါးရေးမော်ဒယ်များ ကို သိရှိထားဖို့ဟာ အရေးကြီးတယ်။
စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် အဆင်ပြေနိုင်မဲ့ အီးကောမားစ်စီးပွါးရေးမော်ဒယ် ဆိုပြီးတော့ မရှိနိုင်ပေမဲ့လည်း လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းအလိုက် သင့်တော်မဲ့ အီးကောမားစ်စီးပွါးရေးမော်ဒယ်များကို ရွေးချယ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းဟာ လုပ်ငန်းရဲ့ အစပိုင်းမှာ ရင်နှီးမြုပ်နှံမှု များများစားစား မပြုလုပ်ချင်သေးဘူး ဆိုရင်တော့ ဒရော့ပ်ရှစ်ပင်း Dropshipping ဆိုတဲ့ အီးကောမားစ်စီးပွါးရေးမော်ဒယ် ဟာ သင့်တော်တယ်။
ဒါပေမဲ့ လူကြီးမင်းဟာ ကုန်လှောင်ရုံတွေမှာ ပစ္စည်းတွေ သိုလှောင်ထားပြီး အွန်လိုင်းကနေ ရောင်းချဖို့ စိတ်ကူးတယ်ဆိုရင်တော့ လက်ကား ဖြစ်တဲ့ Warehousing သို့မဟုတ် လက်လီဖြစ်တဲ့ Retail ဟာ သင့်တော်တယ်။
သို့မဟုတ် လူကြီးမင်းဟာ တချို့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ပြုလုပ်တဲ့ဆိုင်တွေမှာအပ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်နာမည်နဲ့ အွန်လိုင်း မှာ ရောင်းချမယ် စိတ်ကူးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြင့် White Labelling သို့မဟုတ် Private Labelling နဲ့ Manufacturing ဟာ ကောင်းမွန်တယ်။
ပြီးတော့ စားသုံးသူတွေက လစဉ်ပုံမှန်ကြေးပေးသွင်းကြရတဲ့ Subscription ဆိုတဲ့ အီးကောမားစ်မော်ဒယ် လည်း ရှိသေးတယ်။
ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားမိတဲ့ အီးကောမားစ်မော်ဒယ်တစ်ခုကတော့ ကုန်ပစ္စည်း တစ်မျိုးတည်းကို ရောင်းပြီး Amazon လို အွန်လိုင်းစျေးကွက်ကြီးတွေနဲ့ Affiliate လုပ်ပြီး ကော်မရှင်ခ ရယူခြင်းပါပဲ။
2. အွန်လိုင်းစျးကွက်တစ်ခုမှာ စားသုံးသူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်/လိုအပ်နိုင်ချေများ Niche ကို လေ့လာခြင်း
တခါတလေ အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေက သူတို့ရဲ့ အွန်လိုင်းစတိုးကို ကျွန်တော့ကို ပြကြတဲ့အခါ ကျွန်တော် စိ်တ်ပျက်မိလေ့ရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့ အွန်လိုင်းစတိုးမှာ ကုန်ပစ္စည်းပေါင်း ရာချီထောင်ချီ တင်ထားကြတယ်။ လုံးဝကို ဖိုးကပ်စ် မရှိတတ်ကြဘူး။
စျေးကွက်ရဲ့လိုအပ်ချက် သို့မဟုတ် စားသုံးသူ ကတ်စတမ်မာတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်/လိုအပ်နိုင်ချေများကို လေ့လာသိရှိနိုင်ခြင်းဟာ အွန်လိုင်းစီးပွါးရေးရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်များထဲက တစ်ချက်ဖြစ်တယ်။
ဥပမာ ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာ အရောင်းထွက်နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းမျိုးတွေနဲ့ စတင်သင့်တယ်။ အပြိုင်အဆိုင်ရှိတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းမျိုး ဒါပေမဲ့လည်း အရမ်းရောင်းကောင်းလွန်းနေတဲ့ ပစ္စည်းမျိုးလည်း မဖြစ်သင့်ဘူး။
အပြိုင်အဆိုင် မရှိသေးတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းမျိုးဟာလည်း စျေးကွက် မရှိတတ်ပြန်ဘူး။
3. ပစ်မှတ်ထားစျေးဝယ်သူများနဲ့ အရောင်းသွက်ကုန်ပစ္စည်းများကို လေ့လာခြင်း
လူကြီးမင်းဟာ အီးကောမားစ်စီးပွါးရေးမော်ဒယ်တစ်ခု အွန်လိုင်းစျေးဝယ်သူများရဲ့ လိုအပ်နိုင်ချေများကို လေ့လာပြီးပြီဆိုတော့ အွန်လိုင်းစတိုးကို စဖွင့်ချင်နေလောက်ပြီ။
ဒါပေမဲ့လည်း မစပါသေးနဲ့ဦး။ အွန်လိုင်းမှာ ဘယ်ကုန်ပစ္စည်းကို တင်ပြီးရောင်းမယ်ဆိုတာ မတွေးရသေးခင်မှာ ဘယ်စားသုံးသူတွေကို အဓိက ရည်ရွယ် ပစ်မှတ်ထားမလဲဆိုတာကို အရင် ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းရဲ့ အွန်လိုင်းစတိုးဟာ ဘာကို ကိုယ်စားပြုပါသလဲ? ဘယ်စားသုံးသူတွေကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးမှာလဲ? ပြီးတော့ လုပ်ငန်းနာမည် Band Name ဟာလည်း အရေးကြီးတယ်။
ဥပမာ သဘာဝ အော်ဂဲနစ်မျိုးစေ့ရောင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာ ဓာတ်မြေသြဇာ ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင် သိပ်ကြာရှည်မြဲဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
အွန်လိုင်းစျေးဝယ်သူ ကတ်စတမ်မာတွေကို ဘာနာမည်နဲ့ သိစေမယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင် ရောင်းမဲ့ အရောင်းသွက်မဲ့ကုန်ပစ္စည်းအတိအကျကို စစဉ်းစားဖို့ အချိန်တန်ပြီ။
4. လုပ်ငန်းနာမည်ရွေးချယ်မယ် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ယူမယ်
အောင်မြင်တဲ့ စီးပွါးရေး စတင်ဖို့ဆိုရင် လုပ်ငန်းနဲ့ ကိုက်ညီလိုက်ဖက်မဲ့ လုပ်ငန်းနာမည်တစ်ခုရှိဖို့ လိုအပ်တယ်။
လူကြီးမင်းရဲ့ အွန်လိုင်းစတိုးအတွက် ဒိုမိန်းနာမည် Domain Name ရွေးချယ်မယ်
အွန်လိုင်းစတိုးအတွက် လိုဂို Logo ပြုလုပ်မယ်
လုပ်ငန်းနာမည် နဲ့ အွန်လိုင်းစတိုးနာမည် တူညီရန်မလိုအပ်ပေ။
5. ဒီဂျစ်တယ်စီးပွါးရေးအစီအမံ Business Plan ကို ရေးဆွဲခြင်း
ယခုထိလောက်ဆို လူကြီးမင်းဟာ လူကြီးမင်းရဲ့ အွန်လိုင်းစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းဟာ ဘယ်ပုံဘယ်ဝါ ဆိုတာကို သိပြီးနေလောက်ပြီ။
ယခုချိန်ဟာ ခေတ္တခဏလေး နောက်ဆုတ်ပြီး စီးပွါးရေးအစီအမံ Business Plan တွေကို စာရွက်ပေါ် ချရေးဖို့ အချိန်တန်ပြီ။
ငွေအရင်းအနှီး Capital ဘယ်လောက်နဲ့ စတင်မလဲ? ကုန်ကျစရိတ်တွေ Cost ဘယ်လောက်ရှိနိုင်မလဲ? ဘယ်တော့လောက် Break Even အရင်းကြေနိုင်မလဲ?
အဲ့ဒီ အစီအမံတွေ အားလုံးကို စာရွက်ပေါ် ချမရေးမနိုင်မချင်း လုပ်ငန်း မစပါနဲ့လို့ အကြံပေးပါရစေ။
6. အွန်လိုင်းစတိုး Online Store တည်ဆောက်ခြင်း
လုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်ပြီး ဒိုမိန်းနာမည်ရွေးချယ်ဝယ်ယူပြီး အွန်လိုင်းစတိုးရဲ့ ဒီဇိုင်းကို စဉ်းစားပြီးတာနဲ့ လူကြီးမင်းရဲ့ အွန်လိုင်းစတိုးအတွက် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပလက်ဖောင်း Ecommerce Platform ကို စတင်ရွေးချယ်သင့်ပြီ။
အွန်လိုင်းစတိုးအတွက် ဘယ်လို ဒီဇိုင်းမျိုးကိုပဲ ရွေးချယ် ရွေးချယ် လူကြီးမင်းဟာ လူကြီးမင်း အသုံးပြုမဲ့ အီးကောမားစ် ဆော့ဖ်ဝဲလ် နဲ့ လိုက်ဖက်ညီဖို့ လိုမယ်။
တကယ်တမ်းမှာ အီးကောမားစ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေဟာ ရာကျော်ရှိနေတော့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ ကိုက်ညီမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ရွေးချယ်ဖို့ဟာ အချိန်တစ်ခု ပေးရလေ့ရှိတတ်တယ်။
အမြန်နူန်း Speed ငွေပေးချေမှုစနစ် Payment ကွန်ပျူတာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု Skills စသည်တို့ကို သေသေချာချာ တွေးထားဖို့ လိုမယ်။
လက်ရှိနာမည်ကြီး ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေကတော့ Magento, Shopify, Big Commerce စသည်တို့ ဖြစ်ကြတယ်။
လူကြီးမင်းဟာ လူကြီးမင်း အသုံးပြုမဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို စိတ်ကြိုက် ရေးပြီးလည်း အသုံးပြုနိုင်တယ်။
7. အွန်လိုင်းစျေးဝယ်သူ ကတ်စတမ်မာတွေကို စွဲဆောင်မယ်
အွန်လိုင်းစတိုး စဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ စျေးဝယ်သူတွေ အလိုအလျောက် ရောက်လာဖို့ဆိုတာဟာ ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းပါးတယ်။ အွန်လိုင်းစျေးဝယ်သူ တွေကို စွဲဆောင်နိုင်မှသာလျှင် ရောင်းအားမြင့်တက်ဖို့ ရှိတယ်။
အွန်လိုင်းစတိုး တော်တော်များများဟာ ဒီဂျစ်တယ်မာကတ်တင်းမှာ တော်တော်လေး ရင်းနှီးမြုပ်နှံကြတာ တွေ့ရတယ်။
လူကြီးမင်းရဲ့ Marketing Budget မာကတ်တင်းဘတ်ဂျတ်ဟာ နည်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ မာကတ်တင်းစာစောင်တွေကို ပုံမှန် ဖတ်ပြီး နည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာဖို့ လိုလိမ့်မယ်။
Posted by admin at 13:47:55 in Ecommerce
Addacomment (209 views)
E-Commerce In My Country (Myanmar)
Amazon’s sales are skyrocketing despite the Covid-19 pandemic. Social distancing is sort of forcing many people to buy online. As the Prime Minister of Singapore during pandemic said, many will have to reinvent to survive. Indeed it’s never gonna be the same again. At least in the way we do business or model business.
Though there are not many issues for well-established markets to buy or sell via the Internet, there are still many obstacles for the emerging market like Myanmar. Many Facebook users are turning into sellers daily as the pandemic is getting momentum. No doubt, e-commerce isadie-die requirement for the country.
In 2019, Myanmar ranked 126 in 152 countries for e-commerce readiness. In comparison, the neighbourhood countries were making much better. What are the hassles? Whatever the hassles are, we all must address the issues together.
Purchasing through the Internet shows no sign of decline outside the country. There isaniche in the country for e-commerce. However there are neither online platforms nor online services fulfilling the niche yet in the country.
According to the data from tradingeconomics.com, GDP of Myanmar has increased from $49.54 billion in 2010 to $67.82 billion in 2015 and estimated $76 billion in 2020. Based on export.gov, Myanmar’s retail market value is estimated to be worth $10 billion. And e-commerce is just $6 million in market value according to Asean Economic Community and it’s expected to grow within the coming five years.
Posted by admin at 05:01:38 in Articles In English, Ecommerce
Addacomment (155 views)